DHAGEYSO Gudniinka fircooniga ee lagu sameeyo gabdhaha soomaaliyeed oo hoos u dhacay – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Gudniinka fircooniga ee lagu sameeyo gabdhaha soomaaliyeed oo hoos u dhacay
Iyadoo caalamka maanta laga xusaya maalinta la dagaalanka ama ka hor taga gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagu sameeyo ayaa waxaa jirta in dhaqankaasi uu hoos u dhac ku yimid marka la eego ismaamulo ay Garissa ka mid tahay.
Maalintan ayaa guud ahaan aduunka looga dabaal degaa sanad kasta taarikhdu marka ay tahay 6-da bisha labaad ee Febraayo.
In badan oo ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed ayaanan weli ku baraarugsaneyn saameynta caafimaad ee gudniinkan uu ku leeyahay gabdhahooda.
Rumana Nuur Axmad waa agaasimaha isbataalka SIMAHO ee magalada Garissa waxayna kamid tahay dhakhaatiirta u olooleeya ka hortaga gudniinka Fircooniga waxayna u warantahay wariyahayaga Cabdisamad Muxumad Cabdi.
Kenya ayaa ka mid ah wadamada maanta laga xusaya maalinta adduunka ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM .
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay António Guterres ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay sharafta , caafimaadka iyo noolol wanaaga maalayiin gabdhood ay halis ku jiraan.
Waxaa uu ka dhawajiyay inaan loo baahneyn in waqti dheeraad ah la sii lumiyo oo la iska kaashado in la ciribtiro dhaqankan.
Haweenka horay gudniinkan u soo maray ee dalka Hindiya ayaa dowlada wadankaasi ugu baaqay inay mamnuucdo.
Gudniinka fircooniga ayaa ku baahay qaarada Afrika iyo bariga dhexe in kastoo dadaalo caalami ah oo la sameeyay ay horsedeen in laga mamnuuco 18 wadan oo ay masar ka mid tahay.
Hay’addaha qaramada midoobay u qaabilsan tirada guud ee dadweynaha ku nool caalamka iyo mida caruurta ee kal ah UNFPA iyo UNICEF ayaa hormuud ka ah ururada ku dadaalaya in laga tanaasulo gudniinka FGM.
Waxay wadaan barnaamij ay diirada ku saarayaan 17 wadan oo ka tirsan qaarada Afrika.
Guud ahaan caalamka waxaa la qiyaasaa in ugu yaraan 200 millyan oo isugu jiro gabdho iyo haween lagula kacay FGM.
44 milyan oo tiradaasi ka mid ah waa gabdhaha ay da’doodu tahay 14 sano iyo wax ka yar.
Wadanka ugu horeeya qaarada Afrika ee gabdhaha ku nool noocan oo kale loo gudo ayaa ah Gambiya waxayna yihiin boqolkiba 56 ,Mauritaniya boqolkiba 54.
Dalkan Indonesiya ku dhawaad kala bar gabdhaha 11 sano jirka ah ama ka hooseeya gudniinkan ayaa lagu sameeyay.
Dalka soomaaliya boqolkiba 98 ee haweenka u dhexeya 15 ilaa iyo 49 sano waxaa la mariyay gudniinka fircooniga, Guinea boqolkiba 97 halka Djibouti tiradaasi ay tahay boqolkiba 93 .
Hiigsiga hormarka wax ku oolka ah ayaa lagu qorsheeyay in gudniinkan la soo afjaro sanadka 2030-ka.
Madaxa fulinta ee gudiga la dagaalanka gudniinka fircooniga Bernadette Loloju ayaa sheegtay in qaar ka mid ah jaaliyada ku nool dalka ay habeenkii gabdhaha gudaan.
← Amaanka bartamaha magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyay
DHAGEYSO Wasaradda degaanka oo sheegtay in guul laga gaaray bacdii la mamnuucay →